Horudhac: Elche vs Real Madrid… (Kooxda yar oo guuldarro la’aan heysata iyo xiddig laf-dhabar ah oo ka maqan Los Blancos) – Gool FM
Horudhac: Elche vs Real Madrid… (Kooxda yar oo guuldarro la’aan heysata iyo xiddig laf-dhabar ah oo ka maqan Los Blancos)
(Elche) 30 Okt 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dooneysa inay dib u hesho hoggaanka horyaalka La Liga saacadaha ugu horreeya maanta iyadoo galabta u safreysa naadiga Elche ciyaar ka tirsan horyaalka.
Los Blancos ayaa booska labaad kaga jirta kala sarreynta horyaalka iyadoo 21 dhibcood leh kaddib 10 kulan oo ay ciyaartay waxayna saddex dhibcood ka dambeysaa Real Sociedad oo 11 kulan kaddib uruursatay 24 dhibcood, Elche ayaa ciyaartay 11 kulan, balse waxay 10 dhibcood la fadhisaa kaalinta 15-aad ee kala sarreynta horyaalka.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 03:00 Galabnimo xilliga Geeska Afrika.
Kaliya Pablo Piatti ayaa ka maqnaan doona naadiga Elche ciyaarta galabta, waxaana macallinka kooxdaas ee Fran Escriba uu heli karaa shaxdiisa ugu adag.
Dhinaca kale, warka ugu weyn ee naadiga Real Madrid safkeeda waa inuu ciyaartan maqan yahay weeraryahankeeda Karim Benzema oo cagta ka dhaawacan, waxaana diiwaanka xiddiga dhaawaca ku maqan uu kula biiray Federico Valverde, Gareth Bale iyo Dani Ceballos.
Elche ayaa guuldarro la kulantay sagaal ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeysay La Liga oo ay la ciyaartay Real Madrid, waxayna kulanka kale barbarro la gashay bishii December ee sanadkii hore ciyaar ku dhammaatay 1-1.
Elche ayaa dhinaca kale guuldarro la’aan ah lixdii kulan ee ugu dambeysay La Liga oo ay garoonkeeda ku ciyaartay iyadoo labo guul gaartay afarta kalena barbarro heshay, waana guuldarro la’aantii ugu dheereyd horyaalka ee ay garoonkeeda ku sameyso tan iyo 2014 markaas oo ay 11 kulan wax guuldarro ah garoonkeeda kaga qaadan horyaalka dalka Spain.
Carlo Ancelotti ayaa ka adkaaday Elche dhammaan afartii jeer ee uu kaga hor tagay La Liga, waxayna ka mid tahay lix naadi oo uu horyaalkan kaga gaaray guulaha ugu badan isagoo ka heysta rikoor 100% ah.
Karim Benzema ayaa si toos ah ugu lug yeeshay afar gool afartii kulan ee ugu dambeysay oo uu wajahay Elche isagoo ka dhaliyay saddex gool midka kalena ku caawiyay, waxaana ku jira labo gool oo uu kaga dhaliyay kulankii ugu dambeeyay bishii March ee sanadkan 2021.
Horudhac: Leicester City vs Arsenal... (Gunners oo hannaan wacan ku socota & Jamie Vardy oo...)